Kushambadzira Mamiriro Kubva kuGehena - Matani Evatungamiriri, Asi Hapana Kutengesa | Martech Zone
Muvhuro, Zvita 12, 2016 Jamil Velji
Kunyangwe kuve neyakagadzikana sosi yekutungamira yatove chinhu chakakura kune chero bhizinesi, hazviunze chikafu mundiro. Iwe uchave unofara kana yako yekutengesa kudzoka yakaenzana kune yako inoshamisa Google Analytics mushumo. Mune ino kesi, zvirinani chikamu cheizvi zvinotungamira chinofanirwa kushandurwa kutengesi nevatengi. Ko kana iwe uri kuwana matani emitobvu, asi pasina kutengesa? Chii chausiri kuita nemazvo, uye chii chaungaite kudzora yako fanera yekudzokera kune kwayo kurudyi nzira.
Kana iwe uchinetseka pamusoro penyaya dzakadai, nhanho yako yekutanga inofanira kunge ichinyatso tarisa kune yako webhusaiti uye mushambadziro wekushambadzira. Izvo zvinokwanisika kuti imwe yevaviri haisi kuita zvakakwana kushandura vashanyi vako kuva vatengi. Mushandirapamwe wako uri kutarisirwa nemazvo here? Ko iwe webhusaiti yako? Ngatitarisei pazviitiko zviviri izvi;
Muenzaniso 1: Mushandirapamwe Usina Kutarisirwa
Kuti uone kana dambudziko ringave rekushambadzira kwako, unogona kutanga nekuriongorora zvakakwana. Kana iwe uchimhanyisa Google Ads mushandirapamwe, funga nezve kutarisa zvakanyanya kune yako yekutsvaga mhinduro yekutsvaga. Iwe haudi ruzivo rwehunyanzvi kuti uongorore izvi. Iwe unenge uchitarisa pamatemu ari kushambadziro yako ayo vashanyi vari kushandisa kuwana yako saiti. Izvo zvine chekuita nezvauri kutengesa?
Chaizvoizvo, vatengi vanobaya pamashoko ekutsvaga mune shambadziro inoenderana nezvavari kutsvaga. Mune ino kesi, kana iwe uri kutengesa "madzimai echikwama emabhegi", shandisa mazwi ekutsvaga uye misiyano yeSEO yakasarudzika kune chako chigadzirwa. Izwi mukushambadzira kwako senge "mabhegi ematehwe" kana "madzimai emabhegi" rakawandisa uye rinotsausa. Paunenge iwe uchinge waona iro rakakodzera kiyi yekushambadzira kwako, uve naro mune yako yekuratidzira URL kune ese kushambadzira, zita remushandirapamwe uye mune rondedzero. Mhedzisiro yekutsvaga ichaita kushinga mazwi akakosha nekudaro ichiita kuti zvioneke.
Chimwe chikamu chemushandirapamwe chingave chiri kutungamira kukushandurwa kwakashata rudzi rwechigadzirwa, mhando yekupa uye mutengo waunopa. Kana iwe uchizomhanyisa mushandirapamwe wechigadzirwa chako kana sevhisi, zvirinani ita tsvagiridzo yako nemazvo kuti uzive zvinodiwa nevatengi vako uye zviri kupihwa nemakwikwi ako. Ita shuwa kuti chigadzirwa chako chine poindi yakasimba iyo iwe yaunoratidzira zvakajeka mune yako yekupa. Zvakare, rega mutengo uve unokwikwidza zvichienderana nezvine musika.
Muenzaniso 2: Webhusaiti Isina Ruzivo
Paunenge iwe uchinge watonga kunze kwechirongwa chemushandirapamwe kana kugadzirisa nyaya, yako inotevera mhosva inogona kunge iri webhusaiti. Zvichida webhusaiti yako iri kukwezva zvakakwana. Nekudaro, iwo anoshanda sei mapeji ekumhara? Zvakadiniko nezve dhizaini yayo, inoshandisa-mushe here? Dzimwe nguva, iwe ungatofanira kufunga semutengi uye woongorora zvinotevera zvinhu zvesaiti yako kubva pakuona kwavo.
patani - Kana iwe uri kupupurira traffic yakakwira isingasvitse pakutendeuka, pamwe vanhu vari kumhara pane yako webhusaiti uye kuwana tsika yekuvhunduka. Ivo zvechokwadi vanoenda! Zvibvunze kana iwe webhu dhizaini yako ichienderana nemaitiro azvino muindasitiri yako. Nhasi, tekinoroji iri kukura nekukurumidza, uye vanhu vava kujairira zvinhu zvemhando yepamusoro. Mune ino kesi, kuve neyakavhurwa saiti iyo zvakare isiri nhare inoshamwaridzika izere kudzima. Rega dhizaini yako ipe chiratidzo chaicho chebhizinesi rako uye vatengi vanonamira kwakatenderedza kwenguva refu.
Contact Details - Kune vatengi, kuvapo kwemashoko akajeka ekubata chiratidzo chekuti webhusaiti kana bhizinesi nderechokwadi uye rakavimbika. Izvi zvinoita kuti zvive zvakakosha kuisa zvakadaro mune yako dhizaini. Ita shuwa kuti nhare yako uye maemail aunopa anoteererwa. Nenzira iyi, kana vatengi vakabata unogona kuwana mhinduro mukati menguva inonzwisisika. Iwe unofanirwa kusanganisira iyo chaiyo kero yebhizinesi rako zvakare.
Mapeji anomhara - Iri ndiro peji rekutanga vashanyi vako vanosvika kamwe pavanodzvanya ma ads ako. Mune ino kesi, ita shuwa kuti inoenderana kune chero iwe urikushambadzira. Kana vakasawana zvavaitarisira, mikana ndeyekuti ivo vanongosiya iro peji. Semuenzaniso, kana mazwi ako akakosha ari "email automation chishandiso," rega aya mazwi atungamire kune peji rinopa ruzivo nezve ichi chishandiso. Zvakare, ita shuwa kuti ako ekumhara mapeji anotakura zviri nyore uye anokwanisa kwazvo kufamba.
Navigation - Zviri nyore sei kuti vatengi vafambe nemapeji akasiyana ewebhusaiti yako. Vatengi vazhinji vanosiya peji nekukasira kana vakaona vari kutambisa nguva yakawanda kutsvaga zvavari kutsvaga. Mune ino kesi, gadzira yako mawebhusaiti akadai kuti mapeji ese avhure nyore. Zvakare, mapeji akakosha seaya anoratidza zvigadzirwa nemasevhisi, nezve bhizinesi, vanobatika uye zvichingodaro zvinofanirwa kunge zvichioneka uye zviri nyore kuwana.
Dana Kuita - Kudanwa kuti chiitwe ndiyo gedhi kune chero kumwe kutaurirana kwaungangodaro uine munhu anotarisira mutengi. Izvi zvinoita kuti zvive zvakakosha kuvaka maCAA akajeka uye mabhatani akakurumbira zvakafanana. Rega zvinongedzo zvakapihwa zvitungamire kune chinotevera chiito chaunoda kuti vatengi vako vaite.
Kana iwe uchida kuvandudza hurukuro dzako, gadzirisa rako repamhepo bhizinesi mukurumbira. Izvi zvinodaro nekuti vatengi vangangoverenga ongororo kana kuenzanisa masevhisi ako uye zvigadzirwa nevamwe. Neichi chikonzero, gara uchipa stellar services asi tora vatengi vako kuti vasiye mhinduro uye zvipupuriro futi. Zvese izvi zvinobatsira kuti bhizimusi rako repamhepo riite serinovimbika uye rinozovandudza yako CTR.
Tags: ctrinboundinbound Marketingpamapejizvinoisaanokwanisa anotungamirawebsite web design
Jamil ndiye CEO we Nyore zvoga Sales, Mutengesi weKutengesa. Unyanzvi hwake mukushambadzira, kubiridzira kwekukura, kutungamira chizvarwa uye kutengesa uye kushambadzira otomatiki kunoshandura kuita kunzwisisika, nzira dzinoitika dzekutora kutengesa kuburikidza nedenga! Jamil ane makore 9+ ane ruzivo seye yepamusoro nhanho yekushambadzira mutungamiri pane chiyero chepasi rose. Vatengi vake uye nyaya dzekukura kwavo dzakaburitswa muForbes, BBC, Tech Crunch uye Venture Beat.
Yakanakisa chinyorwa Jamil, koka zvakawanda kuti ufunge nezvazvo.
Kwaziso kubva kuAlicante, Spain.
Jan 18, 2017 na8:23 PM
Kazhinji yenguva, vatengi vanotarisa kutanga kune wongororo yekambani kana mhinduro yemumwe mutengi vasati varamba vachiona kana kufarira kutarisa kuburikidza nemapeji akasiyana ewebhusaiti yako. Izvo zvakakosha kubata nekuvandudza nguva nenguva zvirimo, uye chitarisiko uye zvakanyanya kunyanya kutaurirana uye kubatana kwako kune vakasiyana vatengi. Mishandirapamwe uye inotungamira haingatariswe inobudirira kana uri kungotora matanho, asi iwe hauna kudzoka kwekutengesa kwakakodzera, saka zvakakosha kubata uye kuva nazvo zvese.